Global Voices teny Malagasy » Ireo Mpitarik’ady Miteny Amin’ny Vahoaka Libane: Ndeha Isika Hamela Heloka Sy Hanadino! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Janoary 2016 17:35 GMT 1	 · Mpanoratra Abir Ghattas Nandika Tantely
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Ny Tetezana - The Bridge
Miavaka i Libanona, fantatray izany, satria Phéniciens  ireo razanay ary satria sady afaka milomano no migorisa amin'ny ranomandry amin'ny andro iray izahay . Fa mihavaka ihany koa i Libanona satria mbola eo amin'ny fahefana ihany ireo olona malaza an'ny ady an-tranon'i Libanona , mandihindihy eo ambonin'ireo vatana mangatsiakan'ny olon-tsotra maty an'arivony sy ireo Libaney olon-tsotra velona miisa 4,5 tapitrisa. Ny faha 18  Janoary 2016, neken'ilay lehiben'ny Hery Libane  Samir Geagea  ampahibemaso ny firotsahan'ilay fahavalony tamin'ny ady, Michel Aoun , ho kandidà ho filohampirenena. Midika izany fanekena izany fa mety hahazo filoha vaovao ihany amin'ny farany i Libanona, taorian'ny 20 volana izay naha-tsy nisy mpitàzona ny toerana avo indrindra tao amin'ny firenena.
Izao ny fisehoan-javatra sasantsasany. Geagea, ilay lehiben'ny mpanatanteraka amin'ny Hery Libaney , antoko politika Kristiana faharoa lehibe indrindra ao Libanona, ary Aoun, Kaomandin'ny Tafika Libaney teo aloha sady mpanorina ny Free Patriotic Movement  (Hetsika Fitiavan-tanindrazana Malalaka), dia mpifahavalo niady nifanandrina nandritra ny Ady an-trano Libaney  (1975-1990). Ny 31 Janoary 1990, nifandona tamin'ny Hery Libane ( milisy iray tamin'izany fotoana) ny Tafika Libaney, teo ambany fitantanan'i Aoun. Nametraka fanamariha tamin'ny fanambaràn'i Aoun moa io Hery Libaney io hoe natao ireny ho an'ny tombotsoan'ny firenena mba “hampiraisan'ny governemanta ireo hery fiadiana”, midika izany hoe tokony ho eken'ny Hery Libaney ny fahefany ho toy ny filoham-panjakana vonjimaika. Nahafaty olon-tsotra an-jatony maro ilay fifandonana.
Tsapako ny filàna ny fanampiako ny anjara birikiko —na ny liras roako —amin'ity raharaham-panjakàna ity noho ny zavatra nolazain'ny Jeneraly Aoun nandritra ny nampitahain ‘ilay mpitoraka bilaogy, Joey Ayoub, amin'ny kabary fanekena amin'ny Oscars — hoe te-hamela ny lasa ho momba ny lasa izy mba hanorina ny hoavy .
Nizara tamin'ny Aterineto ireo tantara n'ny fotoana nidarohan'i Aoun sy Geagea ireo mpiray vodirindrina aminy ny vahoaka. Tsy afaka ny hanamarina izao aho, satria mbola tanora loatra aho tamin'izany fotoana izany ary nanana “vintana” ny ho teraka tany amin'ny tanàna lavitry ny maro tany avaratr'i Libanona. Tsy afaka ny hanamarina voalohany ny alahelo nentin'ny ady aho, ny famoizana, ny tahotra, ny fiainana voahodidin'ny fahafatesana. Fa afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny fankahalàna hitako aho, ary mbola manohy mahita maso izany, eo amin'ireo olona mitovy taona amiko na tanoranora kokoa izay tsy niaina tao anatin'izany ady izany koa. Na inona lazain'ny olona, efa voazarazaran'ny fitsitokotokoana ireo faritra, tanàna ary fiarahamonina aty Libanona, efa voazarazaran'ireo antokon'i Aoun sy i Geagea.
Na hadisoantsika aza izany (isika koa no te-hifidy azy ireo hatrany hatrany, manome alàlana antsika hanao fifidianana ireny fotoana ireny), tsy te-hitsahatra ny hino aho hoe mendrika ny tsaratsara kokoa isika. Ity fanekena  ity, ity fifanarahana eo amin'ireo roa mpano heloka bevava an'ady ity, dia mbola maneho fàntsika iray hafa amin'ny vatapatin'ny fahatsiarovana faobe antsika miaraka ihany. Ankehitriny, isika izay tsy niaina izany ady izany samy tsy afaka ny hitàzona ireo lehilahy ireo ho tomponandraikitra tamin'ny fahafatesan'ireo olona an'arivony maro. Ary ankehitriny, milaza amintsika izy ireo ny mba hanadino sy handroso. Satria ve metimety amin'izy ireo izany? Satria taorian'ireo taona maro saika hifandevonan'izy ireo, io no hany làlana tokana hijanonana ho velona? Tsy tokony hametraka fanontaniana momba ny lasan'izy ireo na hitaky ny rariny isika, ary tian'ireo lehilahy ireo hahatoky azy ireo fotsiny ve isika amin'ny hoavintsika?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/20/78608/
 sady afaka milomano no migorisa amin'ny ranomandry amin'ny andro iray izahay: http://www.albawaba.com/editorchoice/ski-and-swim-day-lebanon-420055
 ady an-tranon'i Libanona: https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Civil_War
 faha 18: https://globalvoices.org/2016/01/18/will-lebanon-finally-have-a-new-president-after-geagea-endorsed-aoun/
 Hery Libane: https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Forces
 Samir Geagea: https://en.wikipedia.org/wiki/Samir_Geagea
 Michel Aoun: https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Aoun
 Free Patriotic Movement: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Patriotic_Movement
 hoe te-hamela ny lasa ho momba ny lasa izy mba hanorina ny hoavy: https://twitter.com/LBCI_News_EN/status/689133682376839170